Maalinta: Maarso 18, 2017
Kinali Lambarada Lahaanshaha ee Metro
Kınalı Kuzular wuxuu ku noolaa Ruuxa Çanakkale ee Wadada: 102 ee Guusha Çanakkale. Niyad qabkii Dardanelles ayaa dib loogu soo nooleeyay Saldhigga Magaalada Istambul ee Magaalada Istanbul. Bandhigga ın Kınalı Kuzular tı wuxuu lahaa shucuur buuxa oo ka dhacday Istanbul Metro. Weyn Istanbul [More ...]
Munaasabadda Xarunta 1915 ee Caanakkale Bridge ayaa la dhigey xaflad
aasaaska buundada 1915 Dardanelles la dhigay xaflad: abuuritaanka 100 Jamhuuriyadda Turkey. Aasaaska Buundada 'akanakkale 2023 Bridge, oo lagu bixin doono cinwaanka en en buundada ugu dheer ee is-dhexgalka adduunka, ayaa la dhigay xaflad. ra'iisul-wasaaraha [More ...]
Qorshaha dilka oo la jebiyey sababtoo ah fiirsashada makaanikada: Injineerka dhismaha tareenka Konya-Izmir wuxuu joojiyay inuu arko tareenka markii qof arkay isagoo jiifa wadada tareenka. Farsamo yaqaan taxaddar leh oo arkay in hunguriga qofka jiifsan biraha uu si dhakhso leh u gooyay [More ...]
Xuddunta Tamarta ee Tareenka ee Edirne
Tuug xatooyo Quwada Tamarta ee Wadada Tareenka ee Edirne: Tuugii xaday fiilooyinkii tamarta ee jidka Edirne - khadka tareenka ee Istanbul waxaa lagu qabtay shaqadiisii ​​kooxaha gendarmerie. 20 METER WIRELESS Kırklareli Taliska Gobolka Gendarmerie [More ...]
Duulimaadyada ka yimid Yunuseli ayaa dib loo bilaabay
Duulimaadyada ka imanaya Yunuseli ayaa dib u bilaabay: Duullimaadyadii Burunlaş Aviation ee Yunuseli-Haliç, oo ay xannibeen ceeryaamo culus, ayaa dib u bilaabay. Laga bilaabo usbuucii la soo dhaafay, duullimaadyada diyaaradaha badda, oo ay hakin jirtay ceeryaamo culus, ayaa mar kale bilaabmay. Yunuseli [More ...]
1915 noqon doonaa madaxa rukunka ah diirada u Dardanelles Bridge 2023: Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, "dhaqaalaha Turkey ayaa sii darto" in kasta oo ay kuwa isku dayaya in ay abuuraan aragtida, ay hayaan iskaashiga dadweynaha-gaarka loo leeyahay 1915 Canakkale Bridge [More ...]
Agaasimaha Guud ee Waddooyinka 3.Köprü Sharaxaadda Kaalmada
Agaasinka Guud ee Wadooyinka 3.Köprü Faahfaahinta Dayactirka: Agaasinka Guud ee Wadooyinka Waaweyn, wargeysyada iyo websaydhyada qaarkood, waxay sheeganayaan in qiimaha dayactirka ee Buundada Yavuz Sultan Selim Bridge Agaasimaha Guud ee Wadooyinka waaweyn ay sheeganayaan. [More ...]
Maanta Taariikhda: 18 Maarso 1967 wuxuu ku yaalaa Anadol Express Express
Maanta oo ah Taariikhda 18 Maarso 1920 Strait of Geyve waxaa xukumayay ciidamada qaranka waxaana buundooyinka iyo burooyinka la burburiyey. Khadadka telefishanka isgaarsiinta ee wadada tareenka ayaa la jaray. 18 Mart 1967 Rakaabka Anatolia Express, [More ...]